Kenya iyo Mareynkanka oo ku baaqay dardar gelinta dagaalka ka dhanka Kooxaha argagixisada – Radio Muqdisho
Kenya iyo Mareynkanka oo ku baaqay dardar gelinta dagaalka ka dhanka Kooxaha argagixisada
Waxayna si gaarka ah u sheegeen iney muhiim tahay in la xoojiyo dagaalka ka dhanka ah Kooxaha hororka argagixisada ah ee ka dagaalama Soomaaliya.
Madaxweyne Kenyatta, oo wadahadal la yeeshay Waldhauser, ayaa sheegay in xasarad siyaasadeed oo ka jirta Koonfurta Suudaan ay ka sii dartay cabsida aan loo baahneyn iyo is aaminaad la’aanta taageerayaasha madaxweynaha Salva Kiir iyo hoggaamiyaha mucaaradka Riek Machar.
Waldhauser, dhinaciisa, wuxuu hoosta ka xariiqay baahida loo qabo in Soomaaliya ay xoojiso dhismayaasha hoggaanka, isaga oo intaa ku daray in xasilooni la’aanta ay qayb ahaan sabab u tahay faragelinta aan tooska ahayn ee ka imaanaya wadamada kale, sida lagu sheegay bayaanka.
“Waxaan diyaar u nahay in aan sii wadno caawinta waddanka, illaa inta xukuumadda federaalku ay diyaar u noqoneyso inay aqbasho taageeradayada,” ayuu yiri Waldhauser.
Dowladaha Kenya iyo Mareynkanka waxay qeyb ka yihiin dalalka sida aadka ah u daneeya arrimaha Soomaaliya kana taageera la dagaalanka Kooxaha argagixisada Al-Shabaab iyo Daacish.
Croatia: Dalkii Sadex Iyo Tobanaad oo gaara Fiinalka Koobka Aduunka
Howlaha gar gaarka Soomaaliya oo awood loo siinayo Hay’adaah Maxaliga ah+sawirro